မျိုးသုဉ်းရှားပါး သတ္တဝါများ - ဝီကီပီးဒီးယား
(မျိုးသုဉ်းနိုင်သည့် သတ္တဝါများ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဆိုက်ဘေးရီးယားကျားသည် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ရန် စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေရှိသည့် ကျားမျိုးစိတ် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကျားမျိုးစိတ် ၃ မျိုးမှာ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
အာရှမှ အမဲလိုက်တတ်သည့် သတ္တဝါဖြစ်သော တောခွေးများမှာ မျိုးသုဉ်းရန် အစိုးရိမ်ရဆုံး အခြေအနေရှိသည့် သတ္တဝါဖြစ်ပြီး မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်လု နီးပါး ဖြစ်သည်။
မျိုးသုဉ်းနိုင်သည့် သတ္တဝါများဆိုသည်မှာ အကောင်ရေ လျော့နည်း သွားသည့် အတွက်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အမဲလိုက် စားသုံးရန် အခြေအနေများ ပြောင်းလဲသွားသည့် အတွက်ကြောင့် လည်းကောင်း မျိုးသုဉ်းရန် အတွက် စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေရှိသော သတ္တဝါများကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး သမဂ္ဂမှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရရှိထားသော နမူနာများပေါ်တွင် မူတည်၍ မျိုးသုဉ်းရန် စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေရှိသော သတ္တဝါ ရာခိုင်နှုန်းမှာ သက်ရှိအားလုံး၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်ဟု တွက်ချက်ထားသည်။
နိုင်ငံ အတော်များများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အပေါ်တွင် မူတည်နေသော သတ္တဝါများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်း ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အမဲလိုက်ခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း၊ မြေလွတ်မြေရိုင်း ချဲ့ထွင်ခြင်းကို ကန့်သတ်ထားခြင့်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများ သတ်မှတ်ထားခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။
မျိုးသုဉ်းရန် စိုးရိမ်ရသော သတ္တဝါများထဲမှ ပန်ဒါဝက်ဝံကြီး ကဲ့သို့သော သတ္တဝါ အချို့သာလျှင် စာရင်းထဲတွင် ပါဝင်ပြီး တရားဥပဒေ ကြောင်းအရ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း ခံရသည်။ အခြားသော မျိုးစိတ် အတော်များများမှာ အများပြည်သူတို့၏ သတိပြုမှု မရရှိပဲ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ခြင်း၊ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်နိုင်သည့် အန္တရာယ် ရှိခြင်း စသော အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
၁ ထိမ်းသိမ်းခြင်း အခြေပြ
၂ ကိုယ်ကျင့်တရား အမေးပုစ္ဆာများ
မျိုးစိတ် တစ်ခု၏ ထိမ်းသိမ်းခြင်း အခြေပြ (conservation status) သည် ၎င်း၏ မျိုးသုဉ်း ပျောက်ကွယ်နိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဖေါ်ပြသည်။ ၎င်းကို တွက်ချက်ရာတွင် ကျန်ရှိနေသော အကောင်ပမာန သာမကပဲ အချိန်နှင့်အမြ ဦးရေ ပြောင်းလည်းပုံ၊ မျိုးပွားနှုန်း၊ ရန်သူ စသည့် များစွာသော အခြေများကို ထဲ့သွင်း တွက်ချက်သည်။ IUCN Red List သည် လူသိအများဆုံး စစ်တန်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာအဝှမ်းမှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော် ဇီဝ မျိုးစိတ် ကျယ်ပြန့်ရေး လန်းစဉ် (Biodiversity Action Plans) အဖြစ် ဝင်ရောက် လက်မှတ်ထိုးထားကြသည်။ အမေရိကား နိုင်ငံ တွင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လန်းစဉ် လည်းရှိသည်။
မျိုးသုဉ်းရှားပါး သတ္တဝါများအား IUCN မျိုးသုဉ်းရှားပါး သတ္တဝါများ စာရင်း အရ ခွဲခြားထားပုံ
IUCN မျိုးသုဉ်းရှားပါး သတ္တဝါများ စာရင်း (IUCN Red List of Threatened Species) သည် မျိုးသုဉ်းရှားပါး သတ္တဝါများအား စာရင်းအဖြစ်သာမကပဲ အန္တရာယ် အဆင့်အလိုက် ခွဲထားသည်။ IUCN ခွဲခြားမှု နှင့် အရေးကြီးမှု အရ မျိုးသုဉ်းရှားပါး သတ္တဝါများကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ် မှ အလွန် အန္တရာယ်ရှိ အဆင့် အထိ ခွဲခြားထားသည်။
၎င်းမျိုးသုဉ်းရှားပါး သတ္တဝါများကို လေ့လာရာတွင်သည်ပင် သဘာဝ ပါတ်ဝင်းကျင် လေ့လာသူများသည် ၎င်းသတ္တဝါများ ပါတ်ဝင်ကျင်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည် ကို စဉ်းစားခြင်း မပြုကြခြေ။ "သဘာဝ ပါတ်ဝင်းကျင် အသိပညာ ရှာရာတွင် အဖိုးတန်သော ဇီဝကျင်လည်ရာ ဒေသ (ecosystem) ၏ ထုတ်ကုန်နှင့် ပံ့ပိုးမှုတို့ပါရှိသော ကမ္ဘာ့ ဇီဝ ကျယ်ပြန့်မှု (biodiversity) ကို ထမ်းသိမ်းရာ၌ မကြာခန ကိုယ်ကျင့်တရား အမေးပုဒ်ဆာများ ကြုံတွေ့ရသည်" မှာ မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအမေးပုဒ်ဆာများမှာ ရှင်းလင်းစွာ မဖြေရှင်းနိုင်ပေ။ သဘာဝ ပါတ်ဝင်းကျင် ထမ်းသိမ်းသူများသည် သဘာဝ ပါတ်ဝင်းကျင် တစ်ခုလုံး ချုန်ငုံ၍ ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပြီး သတဝါ တစ်ခုခြင်းစီကို ထမ်းသိမ်းခြင်း မပြုပေ။ ထိုသို့ အကျယ်သဘော်ကို အလေးပြုခြင်းမှာ သတဝါ တစ်ခုခြင်းစီ၏ တန်ဖိုးကို ရော့ကြစေသည်။
မျိုးသုဉ်း အန္တရာယ်ရှိ ကျွန်းနေ မြေခွေး
မျိုးသုဉ်း အန္တရာယ်ရှိ ပင်လယ် Otter
American bison ဦးခေါင်းစုပုံ
California Condor အကောင်ငယ်
↑ Sundarbans tiger project. Tiger extinction information is found in the website's section on tigers.
↑ Minteer & Collins, 2005, p. 332
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျိုးသုဉ်းရှားပါး_သတ္တဝါများ&oldid=473091" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၇:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။